I-Primobolan powder (i-Methenolone Acetate) enye ye-anabolic steroid ekhuselekileyo yabesifazane
/Blog/I-Methenolone Acetate , Pregabalin/I-Primo (i-Methenolone Acetate) enye ye-anabolic steroid ekhuselekileyo yabesifazane
ezaposwa ngomhla 12 / 07 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Methenolone Acetate, Pregabalin.
Iimpembelelo zePrimobolan powder:
Primobolan i-powder isetyenziselwa ukuphatha izidumbu zezilwanyana ukuchitha izifo kwezinye iimeko; nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo kuphela kwiimeko ezinzima okanye apho ukukhuselwa komzimba kuyinzuzo. Le steroid ayiyi kupakisha ngobunzima obufana Anadrol or Deca Durabolin kwaye amaninzi amadoda aya kuba nokusetyenziswa kakhulu kulo mjikelezo wokukhenkceza kwexesha. Noko ke, sinokwenza okungafaniyo nabesifazane. Abasetyhini banomdla ngakumbi kwi-anabolic steroids kunye ncinane kancinci ye-anabolic steroid ingahamba indlela ende. Kubaluleke kakhulu, abaninzi abafazi abafuni ukufumana i-30lbs yesisindo ubusuku bonke. Amancinci, ukunyuka okulinganiselayo kwisisindo ngokuqhelekileyo kunokutshintsha ngokwabo. Ukugcina isimo sengqondo esicatshukileyo engqondweni, abaninzi abantu abasebenzisa le steroid kwimjikelezo yexesha eliqhelekileyo baya kudana.
I-Primobolan nayo iyavuyiswa kakhulu kwimigangatho yezemidlalo. Ukuxhaswa ngokulinganisela ngamandla kunokwenzeka kakhulu kule steroid. Amandla angabhekisela kumandla kunye nekhawulezi, zombini izinto eziphambili ukuphumelela kwezemidlalo. Nangona kunjalo, apho le steroid iya kuba luncedo ngokwenene kukukhuthaza ukubuyiswa. Ukunyamezela kwemizimba kuya kuphuculwa kwaye ngelixa iziganeko ezinjalo aziyi kuba namandla njengoko zininzi ze-steroids, naluphi na uhlahlo olungcono kunokuba kungabikho nto. Ukongeza, njengoko i-steroid elula, umdlali akayi kuba nexhala ngamakhi amakhulu amakhulu ngobukhulu. Kwezinye iimeko, ubungakanani obuninzi obongezelelweyo bunokulimaza ekusebenzeni kuxhomekeke kwimidlalo okanye kwisikhundla. Kwamanye amaxesha, kunokuvelisa ingqalelo engaphethekiyo kumntu onamehlo,
Kuyiwaphi uthenge iPowmobolan yangempela powder (Methenolone Acetate powder online?
Unokufumana i-powmoonol ephezulu ye-Primobolan (i-Methenolone Acetate source source online), kodwa kunzima ukuthenga i-powdone ye-Primobolan powder (i-methenolone i-acetate powder.) Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso ezifake kwiimarike, ngoko xa uthenge iPromobolan (i-Methenolone Acetate) , kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Umlinganiselo wePowmobolan powder:
Kwimeko yokwelapha, indoda eqhelekileyo Amanani e-Primobolan iya kuwela kwi-100-150mg ngosuku lohla. Izinga lezinga lokusebenza liza kuphinda liwele kwicala elifanayo. Nangona kunjalo, amadoda amaninzi abike iziphumo ezifanelekileyo kunye ne-50-75mg ngosuku. Amanani aphezulu anganyamezelwa ngokufanelekileyo, kodwa ininzi iya kugcina kwiindawo ezidweliswe. Amadoda amaninzi aya kufumana le fayili ye-dosing epheleleyo xa idibene namanye ama-anabolic steroids. Izitampu eziqhelekileyo zingabandakanya iTrenbolone, Masteron, Anavar okanye iWinstrol. Kungakhathaliseki ukuba i-dose, i-8 yeveki ye-Primo iyimilinganiselo. Oku akuthethi ukuba umjikelezo wonke unyanzelekile kwii-8 iiveki ezide kodwa lo ngumyinge oqhelekileyo we-Primo womjikelezo.
Nangona uye waphumelela kwizicwangciso zonyango lwabesetyhini, ukucoca akukhiphi umgaqo-mgangatho wokuba i-dosing yezilwanyana. Kwimijikelezo yentsebenzo, udidi lwe-Primobolan ye-powder dosing range luya ku-25-50mg ngosuku. Uninzi lwabafazi kufuneka bakwazi ukunyamezela loo dose ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, abaninzi abafazi baya kufumana icebo elingcono liza kuba ngumthamo ophantsi we-Primo kunye ne-steroid njengo-Anavar. Ukuba u-Anavar okanye omnye u-anabolic steroid uyongezwa uya kufuna ukugcina i-Primo dose ephantsi okanye uya kuphucula ukusetyenziswa kwempilo. Kungakhathaliseki ukuba i-stacking, umjikelezo wokuqala we-Primobolan kufuneka uqale nge-25mg ngosuku kwaye akukho phezulu. Ukusetyenziswa ngokupheleleyo kufuneka kungabi ngaphezu kweeyure ze-6. Uninzi luya kufumana i-4-6 yeeveki zokunyuka ukugqibelela.
tags: uthenge i-Methenolone i-Acetate powder, athenge iPromobolan powder, I-Methenolone i-Acetate powder, Ipromobolan powder
Akukho mntu uya kukuxelela i-10 inyaniso malunga ne-Trenbolone Acetate	Indlela yokuthenga iVardenafil hydrochloride powder eluhlaza ukusuka e-AASRAW?